Looks Nepal प्रचण्ड– माधव भन्दा ओली चतुर र शक्तिशाली – Looks Nepal
प्रचण्ड– माधव भन्दा ओली चतुर र शक्तिशाली
Mar, 2, 2021	looksnepal
डा. धर्मराज उपाध्याय
प्रचण्ड माधव भन्दा ओली चर्तुर र शक्तिशाली छन । ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आधार अझै बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि ओली उर्जावान नै छन । उनमा कुनै निराशको संकेत छैन । राजनीति भनेको नै उतार चढाव हो ।
यसलाई थेग्न सक्नु पर्छ । ओलीले सवै कुरा थेग्न सक्छन । प्रचण्ड माधवमा त्यो क्षमता छैन । ओली आफना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न सिपालु छन । तर प्रचण्ड माधव त्यसमा असफल छन । नेता भनेको ओली जस्तो हुनु पर्छ । किन भने जस्तो परिस्थितीमा पनि लडन सक्ने क्षमता ओलीमा छ अरु नेतामा छैन । अरु सवै कातर हुन । मैले बेला बेलामा लेखेर भए पनि सुझाव दिने गर्छु तर सुनुवाई हुदैन ।
समस्या यो हो । ओलीले भरपर्दो आधार तय नभए सम्म प्रधानमन्त्री पदवाट राजीनामा दिनु हुदैन । किन भने मुलुक संकटमा जान्छ । सरकार गठन अहिलेको आवश्यकता होइन । नयाँ सरकारको सम्भावना देख्नु भनेको संसद खरिद बिक्रिको खेल हो । यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा पुयाउँछ । अहिले नयाँ सरकार आबश्यक छैन । नौटंकीमा मुलुकलाई फसाउनु हुदैन ।
अहिले जे भइरहेको छ त्यो सवै नौटंकी हो । जनतालाई ढोका दिएर माधव, प्रचण्ड र ओली बिभाजन हुनु भनेको जनता माथिको ठूलो घात हो । किनभने जनता फुट को पक्षमा छैनन । तत्काल नेकपा मिल्नुको बिकल्प छैन । अहिले नेकपा बिभाजन हुनु भनेको जनघात हो । जनताको घात गर्नु भनेको ठूलो पाप हो । अहिले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बनेको छैन ।यस बीचमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस मौन छ ।
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि अन्योलमा छ । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड – माधव गुटले समस्या सृजना गरिरहेको छ । उनीहरुले आफू सकिने बाटो रोजीरहेका छन् । मुलुकको हित चाहने हो भने माधव प्रचण्ड समूह ओली समूहसँग तत्काल एकता गर्नु पर्छ । ओली समूह भनेको नेकपाको मूलधार हो । विगतका कमीकमजोरी लाई सच्चाउँदै माधव प्रचण्ड र ओली समूह पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन लागिपर्नु पर्छ ।
आम चुनाव भएको पाँच वर्ष सम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुन् । किनभने ओलीलाई जनताले पाँच वर्ष सम्म सरकार चलाउने जिम्मा दिएका छन् । यसमा तल माथि हुनु हुँदैन । राजनीतिक स्थिरताको लागि ओली सरकार नै अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने ओलीमा अडान छ । आम नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा गरेका नेता हुन प्रधानमन्त्री ओली । माधव प्रचण्डले भाड्दैमा केपी ओलीको पार्टी भाडिदैन ।
केपी ओली नेपालको आँट र साहस भएका नेता हुन । उनीबाट माधव प्रचण्डले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा नाकाबन्दी हुँदा पनि भारत सँग झुक्दै नझुक्ने साहसी प्रधानमन्त्री हुन् ओली । ओलीलाई कसैले कमजोर नसोचे हुन्छ ।
कलाकार नवल खड्काकाे नेकपा अध्यक्ष द्वयलाई खुल्ला पत्र
नखाएकै विष लाग्यो नि ढुंखर्कमा
हार्दिक श्रद्धाञ्जली “प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो” स्थापना भन्दा अघिकी गायिकामा !!
भ्रमित सरकार,दमित जनता !!
सामरिक सम्बन्ध: नसुल्झिएको एक पहेली
अबको विकल्प: तिर्थ पसखलको नेतृत्व
समय र समय-यात्रा
लक डाउन पछि देश कता ?